तीन प्रमुख पदमा महिला : संयोग कि प्रगतिसूचक? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home पत्रपत्रिकाबाट तीन प्रमुख पदमा महिला : संयोग कि प्रगतिसूचक?
काठमाडौं- अवसर पाए महिलाले कुन काम गर्न सक्दैनन्? नेपालमा एकै समय राज्यका प्रमुख पाँच पदमध्ये तीनवटाको नेतृत्व पाएसँगै महिलाले यो प्रश्नको जवाफ दिने अवसर पाएका छन्। राष्ट्रपतिमा यसअघि नै विद्यादेवी भण्डारी बहाल छिन् भने व्यवस्थापिका प्रमुख पद सभामुखमा ओनसरी घर्ती। न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा सुशीला कार्कीले बिहीबारबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदबहाल गरेकी हुन्। तीन प्रमुख निकायमा एकैचोटि महिला नेतृत्व आउनु एकैदिनको फल नरहेको संविधानविद नीलाम्बर आचार्य सुनाउँछन्। ‘यो संयोग मुलुकमा बन्दै गएको महिलामैत्री वातावरणको उपलब्धि हो, साथसाथै संविधानले जुटाएको अवसर पनि हो,’ उनले भने।
आचार्यका अनुसार समाजमा विभेद समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने विकसित चेतनाको उपज पनि हो यो अवसर। नेपाली समाजमा राजनीतिक विभेदको चेतना हट्दै गएको उनको मूल्यांकन छ। अहिलेको वातावरण बनाउन विभिन्न आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्रको प्रक्रियामा प्रेस र संगठन स्वतन्त्रताले खेलेको भूमिकालाई उनी बिर्सन्नन्। ‘२०४७ पछि आन्दोलन, संगठन, प्रेस स्वतन्त्रता बढे। कानुनी विभेद हटाउन आन्दोलन भए। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा महिलाको संख्या बढ्यो। पार्टीहरूमा दबाब बढ्दै गयो,’ उनले यो परिणामलाई यसरी बुझेका रहेछन्। देशमा बदलिएको परिस्थितिको सूचकले महिलाप्रतिको धारणा फेरिदिएको उनको भनाइ छ। त्यसो त महिला प्रमुख निकायमा पुग्दैमा समाज नबदलिने आचार्यको भनाइ छ। उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री भए पनि पाकिस्तानमा महिलामैत्री वातावरण बन्न सकेन।’ देशमा राजनीतिक, कानुनी तहमा भने असल वातावरण बन्दै गएको दाबी उनको छ। भन्छन्, ‘पार्टीभित्र भने अझै वातावरण बन्न बाँकी छ।’
यस्तो संयोगलाई कानुनले दिएको अधिकारका रुपमा बुझ्न चाहन्छन्, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। उनका अनुसार कुनै पनि उपलब्धिका लागि कानुनी वा वैधानिक आधार चाहिन्थ्यो, त्यो संविधानले दियो। यसलाई उनले नेपालमा लामो समयदेखि चलेको महिला अधिकारको आन्दोलनको परिणाम भन्न रुचाए। विश्व समुदायमा नेपालको संवैधानिक उपलब्धि चिनाउने एउटा माध्यमको रुपमा पनि लिएका छन् उनले यसलाई। आचार्य भन्छन्, ‘तीन मुख्य पदमा आउँदैमा देशका लागि सबै महिलाका लागि भयो भन्ने होइन। यसले मात्र सम्पूर्ण ग्रामीण महिलाको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सक्दैन। गाउँका महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक, पारिवारिक मर्यादाबाट वञ्चित छन्।’
यी समस्या सम्बोधन गर्दै महिलालाई अझ बढी सशक्तीकरण गर्न अहिलेको उपलब्धिलाई उपयोग गर्न सुझाव दिए। ‘महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न अगाडि नीति, कार्यक्रम चाहियो, संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्। तीन महिला प्रमुख हुनुको अवसर, उत्साहलाई प्रतिफल बनाउन मुलुकका लाखौं महिला लक्षित नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले जोड दिए। तीन प्रमुख पदमा महिला पुग्नुलाई एउटा संयोग मात्र मान्छन्, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल। यसलाई उनले कानुनी, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा आएको ठूलो परिवर्तनभन्दा पनि यो संयोग मात्र भन्न रुचाए। ‘प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे समझदारीमा भागबन्डा गर्दा एमालेको भागमा नपरेको भए यो अवसर नआउन पनि सक्थ्यो,’ खनालले यो संयोगको अन्तर्य प्वाक्कै खोलिदिए।
‘प्रधानन्यायाधीशमा महिला आउनु रोलक्रमले पनि हो, सभामुख एमाओवादीले गरेको राजनीतिक निर्णयका आधारमा,’ उनले भने। यद्यपि, केही वर्षयता पार्टीमा महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्या उनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको भने उनी स्विकार्छन्। राष्ट्रपति र सभामुख स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने जिम्मेवारी होइन तर प्रधानन्यायाधीशमा कहिलेकाहीँ संविधान, नियम प्रक्रियाले साथ नदिएका बेला सुझबुझ पुर्यारउनुपर्ने भूमिका आउन सक्ने आँकलन गर्छन् खनाल।
उनी थप्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको सुझबुझ, क्षमता, न्यायपालिकाका लागि मात्र होइन, संवैधानिक पद्धतिका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।’ न्यायपालिका नेतृत्व संवैधानिक विकास क्रममा महŒवपूर्ण साबित हुने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘भर्खर संविधान जारी भएको बेला क्षमताको परीक्षण हुँदैछ।’ राज्यका तीन प्रमुख पदमा महिला पुग्नु सबैको सन्तोष र गौरवको विषय रहेको उनी स्विकार्छन्। ‘यसलाई महिलाको प्रगतिको सूचक मान्नु हुँदैन,’ राजनीतिशास्त्री खनाल भन्छन्, ‘महिलाको अवस्था धेरै अघि बढ्यो भन्ने निर्क्याेल निकाल्नु हुँदैन।’ राज्यप्रणालीमा पुग्न महिलानिम्ति कुनै पनि अंकुश छैन, रोकावट छैन भन्ने एउटा उदाहरण स्थापित भएको उनले सुनाए।
सरकारको बिकल्प खोज्ने बेला भएको छैनः भट्टराई
नयाँ शक्ति नेपालद्वारा अागलागीबाट पीडितलाई राहत वितरण